प्रहरीको नाकैमुनि चोरी, के हेर्दैछ ईटहरी प्रहरी ? - Purbeli News
प्रहरीको नाकैमुनि चोरी, के हेर्दैछ ईटहरी प्रहरी ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १२, २०७५ समय: १७:०३:२३
ईटहरी । केही समय यता नेपाल प्रहरीको ब्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । कुनैबेला अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिएको प्रहरीले आफनो साख दिनप्रतिदिन गुमाउँदै छ । ३३ किलो सुनकाण्ड देखि बलात्कार पछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको अनुसन्धानमा समेत आलोचित बनेको प्रहरी सामान्य सुरक्षाका बिषयमा त अझ कमजोर देखिएको छ ।
सुनसरीको इटहरीस्थित व्यस्त बजारमा नै बुधबार छुरा प्रहार गरी मनि ट्रान्सफर लुटियो । बिराटनगर लाईनस्थित एक्टिभ मनि ट्रान्सफरका संञ्चालकलाई अज्ञात व्यक्तिले छुरा प्रहार गरि नगद लुटेर भागे । मनि ट्रान्सफर ठिक अगाडी केही मिटरको दुरीमा प्रहरी बिट रहेको छ । घटना भएको आधा घण्टापछि मात्र प्रहरीको टोली घटनास्थल पुग्यो । यो घटनाले प्रहरीको सुरक्षा संयन्त्रको धज्जी उडाएको छ ।
मुखमा कालो पट्टी बाधेर आएका व्यक्ति र संञ्चालक बिच केही समय घम्साघम्सी भयो । सो क्रममा लुटेराको छुरा प्रहारबाट संञ्चालकलाई घाइते बनाएर काउन्टरमा रहेको नगद लुटेर भागे । यति हुँदा समेत प्रहरीले घटनाको सुइँको समेत पाएन । यो घटनाले प्रहरी संयन्त्र कति कमजोर बन्दै गएको छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ ।
ब्यस्त बजार त्यसमाथि प्रहरी बिटकै सामुन्नेमा भएको यो घटनाले प्रहरीप्रति जनताको बिश्वास थप घटाएको छ । सामान्य चोरीका घटनामा समेत पटक पटक चुक्दै आएको ईटहरी प्रहरी यो नाकै मुनिको घटनामा समेत थप चुकेको छ । चोरीमा संलग्नलाई खोजी गरी पक्राउ गर्नु प्रहरीको दायित्व हो । यतातर्फ लाग्नु जरुरी छ ।